दशैंमा चङ्गा किन उडाइन्छ ? हेर्नुहोस घतलाग्दो कारण:: Sanchar Garage
दशैंमा चङ्गा किन उडाइन्छ ? हेर्नुहोस घतलाग्दो कारण
वायुमण्डलमा शरद ऋतुको हावा वहन थालेको छ । वातावरणमा उल्लास छाउँदैछ । आकाश सफा र निलो छ । यो मोहक मौसममा रङ्गीबिरङ्गी चङ्गा उड्न थालिसकेका छन् ।
दशैं पर्वको धेरै रमाइलो र आकर्षक पक्षहरु छन् । अझै केटाकेटीहरुलाई त झनै दशैंको महत्व धेरै हुन्छ । दशैं आएपछि साना केटाकेटीहरु धेरै खुसी हुन्छन् ।
केटाकेटीहरु नयाँ लुगा लगाएर पिङमा झुम्मिन्छन् र विभिन्न आकारका रङ्गीचङ्गी चङ्गा उडाउन व्यस्त हुन्छन् । हुन त काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शहर र गाँउहरुमा पनि दशैंमा चङ्गा नउडाइने होइन तर विशेषगरि काठमाडौं उपत्यकामा यो प्रचलन बढि रहेको छ ।
दशैंमा चङ्गा उडाउने प्रचलन कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने एकिन तथ्य नै त छैन तर, बुढापाकाका अनुसार दशैंमा चङ्गा उडाउने प्रचलन धेरे पुरानो हो ।
दशैंमा चङ्गा उडाउने प्रचलनको कारणबारे खोतल्दै जाँदा यो धार्मिक आस्थासँग जोडिएको पाइन्छ । वषर्ा र सहकालका देवता इन्द्रसमक्ष खेतीबालीको लागि हामीलाई पानी पुग्यो भन्ने सन्देश पुर्याउन चङ्गा उडाउने प्रचलन सुरु भएको जनविश्वास रहेको छ ।
दशैंमा चङ्गा उडाइनुको अर्को प्रमुख कारण भनेको मौसम पनि हो । शरद ऋतुमा पर्ने दशैं आसपासको समयमा आकाश खुल्ला र सफा हुन्छ ।
चङ्गा उडाउनको लागि मन्द हावाको बहाव उपयुक्त हुन्छ । दशैंताका झरि पर्ने वा हुस्सु लाग्ने गर्दैन त्यसैले चङ्गा उडाउन उपयुक्त हुन्छ । यतिखेर चैतबैशाखमा जस्तो हावाको बहाव पनि धेरै हुँदैन र चङ्गा सन्तुलित हुन्छ ।
दशैं लागेसँगै टोलटोलमा समूहसमूहबीच चङ्गाचेट प्रतियोगिता पनि हुने गरेको पाइन्छ । प्रतियोगीमध्ये जसको चङ्गाले अरुको चङ्गालाई चेट बनाएर अन्तिमसम्म उडिरहन सफल हुन्छ उ नै विजयी हुने गर्छ ।
तर, चङ्गा उडाउनुलाई एक खेलको रुपमा मात्रै लिनुहुन्न । यो त एक जीवन जिउने कला पनि हो । चङ्गा उडाउने खेलले हामीलाई धेरै कुराहरु सिकाउँछ
चङ्गा उडाउने खेलले हामीलाई मानसिक रुपमा बलियो बनाउँछ र हामीमा महत्वाकांक्षा जगाउँछ । मानिसहरुलाई आकाश छुने लक्ष्य लिन सिकाउँछ र चङ्गाजस्तै उड्ने इच्छा जगाउँछ ।
त्यस्तै, चङ्गा उँडाउदा आफ्नो चङ्गालाई बँचाएर अर्काको चङ्गालाई चेट बनाउनको लागि प्रयास गरिरहनुपर्छ । उसले मानिसलाई अन्तिम समयसम्म हार नमानीकन आफ्नो काममा मात्रै आफ्नो ध्यान केन्दि्रत गर्न सिकाउँछ ।
चङ्गा उडाउने खेल हावाको गतिमा भर पर्छ । चङ्गा राम्रोसँग उडाउनको लागि हावाको गतिसँग सन्तुलन मिलाउन धेरै गाह्रो हुन्छ । हावाले अतिकति दिशा बदल्यो वा हावाको बेग बढ्यो भने हाम्रो चङ्गा भुँईमा खस्न सक्छ ।
१. चङ्गा उडाउन सोखिनहरुले चङ्गा, लट्टाइ र धागो किन्दा ध्यान दिनुपर्छ । बजारमा पाइने धागोहरुलाई बलियो र नचुँड्ने बनाउन मैदाको पिठो, गुँद, पिसेको सिसा मुछेर प्रयोग गरिएको हुन सक्छ ।
यस्तो धागोले हात वा घाँटीमा चोट लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले यस्तो सीसा प्रयोग भएको धागो बच्चालाई नकिनिदिनुहोस् ।
५. कैयौ पटक चङ्गा उडाउँदा बिजुलीको तारमा गएर अडि्कन्छ । यसलाई निकाल्न बच्चाहरु खम्बामा चढ्न सक्छन वा धातुका लठ्ठीहरुको मद्धतले चङ्गा निकाल्ने प्रयास गर्न सक्छन् । यस्तोमा उनीहरुलाई करेन्ट लाग्न सक्छ ।